जुआन गोमेज-जुराडोका पुस्तकहरू, विविधता र साहित्यिक उत्कृष्टता वर्तमान साहित्य
जुआन गोमेज-जुराडोका पुस्तकहरू
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, विधाहरू, किताबहरु, युवा साहित्य
जुआन गोमेज-जुराडोका पुस्तकहरू।
जुआन गोमेजका पुस्तकहरू चालीस भन्दा बढी देशहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन्। अमेजनका अनुसार उनका उपन्यासहरू गद्दारको प्रतीक y Scar २०११ र २०१ during को क्रमश क्रमशः सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने इलेक्ट्रोनिक टेक्स्ट बन्यो। यसबाहेक, स्पेनिश लेखक स्पेनिश भाषामा इलेक्ट्रोनिक ढाँचामा प्रकाशित गर्ने पहिलो लेखकहरू मध्ये एक थिए,भगवानको जासूस, 2006)।
उनका साहित्यिक कार्यहरू विभिन्न विधाहरूमा फैलिएका छन्। रोचक वयस्क थ्रिलर्स बाट -कालो ब्वाँसो (२०१)) - लोकप्रिय युवा र बाल श्रृंखलाका माध्यमबाट, गैर कल्पनिक कथाहरू पनि। विशेष रूपमा, को sags एलेक्स कोल्ट y Rexcatators उनीहरूले विश्वभरि लाखौं बच्चाहरू र किशोर पाठकहरूको खेती गरेका छन्। त्यसकारण, यो धेरै सम्भावना छ कि दुवै श्रृंखलाहरूमा अझै एपिसोडहरू देखा पर्नेछन्।
1 जुआन गोमेज-जुराडोको बारेमा
1.1 जन्म, अध्ययन र रोजगारहरू
2 जुआन गोमेजका पुस्तकहरू
2.1 वयस्कहरूको लागि उनका उपन्यासहरू
2.1.1 भगवानको जासूस (२००))
2.1.2 गद्दारको प्रतीक (२०० 2008)
2.1.3 बिरामी (२०१ 2014)
2.1.4 Scar (२०१ 2015)
2.1.5 सेतो रानी (२०१ 2018)
2.2 एलेक्स कोल्ट श्रृंखला
2.3 Rexcatadores श्रृंखला
2.4 स्वतन्त्र बाल साहित्य प्रकाशन
2.5 उहाँको गैर कल्पना किताब
जुआन गोमेज-जुराडोको बारेमा
जन्म, अध्ययन र रोजगारहरू
उहाँ डिसेम्बर १,, १ 16 .1977 मा म्याड्रिडमा जन्मनुभएको थियो। उनले सीईयू सान पाब्लो विश्वविद्यालयमा सूचना विज्ञान स्नातक प्राप्त गर्नुभयो। आफ्नो पत्रकारिता कार्य मा उनले मिडिया को लागी काम गरी सके जस्तै रेडियो España, नहर +, ए बी सी y संसार, अरु मध्ये। थप रूपमा, उहाँ पत्रिकाहरूको लागि योगदानकर्ता हुनुहुन्छ के पढ्ने, तल Jot y न्यूयोर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा.
गोमेज-जुराडो पोडकास्टमा पनि भाग लिएका छन् (सर्वशक्तिमान y यहाँ ड्र्यागन छन्) र च्यानलमा "Seriotes de AXN" (YouTube)। लेखकहरूको सामूहिक पहल "१ लिब्रो १ युरो" को अंशका रूपमा इलेक्ट्रोनिक ढाँचामा उनी अग्रगामी स्पेनिस भाषी लेखक थिए। गद्दारको प्रतीक (२०० 2008), उनको तेस्रो उपन्यास, उनलाई Torrevieja अन्तर्राष्ट्रिय उपन्यास पुरस्कार को सातौं शहर कमायो।
जुआन गोमेजका पुस्तकहरू
वयस्कहरूको लागि उनका उपन्यासहरू
आजसम्म, म्याड्रिडका लेखकले वयस्क दर्शकहरूको उद्देश्यले नौवटा शीर्षकहरू सिर्जना गरेका छन्। ती सबैमा जुआन गोमेज-जुराडो सस्पेन्स लेभलमा पुग्छन् जुन उनको पाठकहरूले पहिलो बाट अन्तिम पृष्ठमा सास रोक्न सक्षम बनाउँदछ। न त उहाँ काँडा वा विवादास्पद आध्यात्मिक मुद्दाहरूबाट लजाउनुहुन्छ; यसले उनीहरूलाई लुकाउने वा पूर्वाग्रह बिनाको विवरण गर्दछ। उनको कथाको राम्रो ह्यान्डलिंगको कारण, वयस्कहरूको लागि उनका कार्यहरू सधैं बाहिर खडा हुन्छन्।
यी सुविधाहरू पुस्तकहरूमा कुख्यात छन् भगवान संग सम्झौता (2007), चोरको कथा (2012) र श्री व्हाइटको गोप्य इतिहास (2015)। तदनुसार, केही मिडिया -ए बी सी o एल सांस्कृतिकउदाहरण को लागी - तिनीहरूले Gómez-Jurado लाई "थ्रिलरका मालिक" को रुपमा वर्णन गर्छन्। वयस्कहरूको लागि उपन्यासहरूको सूचीले यसलाई पूर्ण गर्दछ:
भगवानको जासूस (2006)
पाठकहरूले साहित्य पोर्टल ब्रान्डमा जारी गरेका केही टिप्पणीहरू भगवानको जासूस एक विवादास्पद पाठ जस्तै। गोमेज-जुराडो अनियमित रूपमा भ्याटिकन भित्र धेरै तनावपूर्ण प्रसंगको बीचमा बिभिन्न प्रोटोकलहरू र सुरक्षा प्रक्रियाहरू वर्णन गर्दछन्। त्यसो भए, पाठक नयाँ पोप छनौट गर्न कन्क्लेवको क्रममा दुई कार्डिनलहरूको हत्याको सम्बन्धमा सोधपुछको लागि डुबेको छ।
तथ्यलाई स्पष्ट पार्न अपराधिक मनोचिकित्सक पाओला डिकन्ती फादर एन्थोनी फाउलरसँग मिल्छ। षडयन्त्रको बिचमा, एउटा क्रुर हत्याराको अस्तित्व थाहा भयो जसको लक्ष्य चर्चका अधिकारीहरू छन्। अनुसन्धानको कठिनाई अधिकतम हो किनभने आधिकारिक स्तरमा कार्डिनलहरूको मृत्यु भइरहेको छैन।
गद्दारको प्रतीक (2008)
कथा १ 1940 in० मा सुरु हुन्छ, जब बहने जर्मनहरूको एउटा समूहलाई एक व्यापारी समुद्री जहाजले बचाउँछ। कृतज्ञता मा, जहाज कप्तान सुन र रत्न को एक उपहार प्राप्त गर्दछ। यस प्रश्नको वरदान वास्तवमा एक मिनीक टुहुरो पॉलको अनुभवसित सम्बन्धित प्रतीक हो। ऊ आफ्नो बुबाको मृत्युको चारैतिर रहेको विरोधाभासपूर्ण विवरणहरूको सत्यता प्रकट गर्न हर हालतमा चाहन्छ।
दैनिक बाँच्नको प्रयास गर्न, त्यहाँ एक यहूदी केटीको लागि निःशर्त प्रेम, चचेरो भाईको उत्पीडन र फ्रीमासनरीमा उनको प्रवेश थपिएको छ। यी सबै तत्वहरूको साथ, गेमेज-जुराडोले पाठकलाई नाजीहरूको शक्तिको बृद्धि भएको वर्षहरूमा फर्काउँछन्, तेस्रो राइकको समेकनभन्दा पहिले।
यो तनावको धेरै उच्च खुराकको साथ एक उपन्यास हो जसले पाठकलाई यसको विकासको hours 36 घण्टामा अलमल्याउँछ। व्यर्थमा होइन २०१ 2014 को सबैभन्दा धेरै पढिएको पुस्तकहरू मध्ये एक थियो। नायक, प्रख्यात न्यूरो सर्जन डेभिड इवान्सलाई समयको बिरूद्धको दौडमा एउटा अपूर्व नैतिक दुविधाको सामना गर्नुपर्दछ। कसरी सबैभन्दा पवित्र (परिवार) र एक कार्य बीचको निर्णय गर्ने जसले इतिहासलाई सँधै परिवर्तन गर्न सक्दछ?
एकै ओर, साइकोपाथले आफ्नी सानी छोरी जुलियाको अपहरण गरेको डाक्टरलाई ब्ल्याकमेल गरिएको छ। खतरा: उसले अपरेटिंग बिरामीलाई मर्नै पर्छ, अन्यथा जुलिया मर्दछ। अर्कोतर्फ, बिरामीको पहिचान फेला पर्‍यो ... संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति भन्दा बढि केहि पनि हुँदैन।
साइमन सेक्सले एक बौद्धिक र भाग्यशाली जवान व्यक्तिको छवि प्रस्तुत गर्दछ - स्पष्ट रूपमा - जीवनमा कुनै कमीहरू छैनन्। थप रूपमा, उनीसँग एक ट्रान्सनेशनल कर्पोरेशनमा एउटा असाधारण एल्गोरिथ्म (आविष्कार गरिएको) को आसन्न बिक्रीको कारण करोडपति बन्ने सम्भावना छ। यद्यपि, मुख्य पात्रले आफ्नो भद्दा सामाजिक कौशलका कारण विशेष गरी महिलाहरूसँग एक विशाल अस्तित्व शून्यता लुकाउँछ।
आफ्नो उदासिनताको बीचमा, साइमनले एक साझेदार पाउनको लागि अनलाइन डेटि to साइटहरूमा जाने निर्णय गर्दछ। त्यसोभए, उहाँ इरिनासँग हजारौं मील टाढा "अजैविक सम्बन्ध" भए पनि तीव्र प्रेम गर्नुहुन्छ। तर उनले एक त्रासदायक गोप्य कुरा लुकाउँछिन्, जुन उनको गालामा रहस्यमय दागसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
सेतो रानी (2018)
मास्टरफुल थ्रिलर एन्टोनिया स्कट र जोन गुटियरेज चरित्रहरूमा केन्द्रित थिए, दुबै म्याड्रिडको मालासियाका बासिन्दाहरू। उनी अरुको समस्या समाधान गर्न धेरै दृढ र साहसी छिन्, जबकि उनीहरुका भित्री राक्षसहरु संग लगातार संघर्ष गरिरहेकी छिन्। ऊसँग उस्तै व्यक्तित्व छ, सहयोगको लागि प्रायजसो पूर्वानुमान गरिएको छ, यद्यपि उसको साथीको सफलताको क्षमता छैन।
पाठ छोटो अध्यायमा संगठित छ, अनिश्चितता र आश्चर्यजनक मोड़हरूले भरिएको। तसर्थ, यो एक धेरै लत र गतिशील पठन हो, एक जारीको लागि योग्य। वास्तवमा, उत्तरकथा २०१ during को समयमा जारी गरिएको थियो: कालो ब्वाँसो। पोष्टले एन्टोनियाको साइकको गहिराई पत्ता लगाउँछ ... कुनै पनि निष्कर्ष? हो, उनको मात्र एक चीज निश्चित छ, उनको मात्र साँचो डर उनीबाट हो।
श्रृंखला एलेक्स कोल्ट
यो बच्चा-युवा थिमको साथ गाथा हो जसको नाटक एलेक्स कोल्ट हो, एक प्यारा, ढिलो र धेरै साहसी केटा। सानो मानवलाई स्लाइडको माध्यमबाट बाहिरी अन्तरिक्षमा कतै सार्दछ। त्यहाँ उसले जान्छ कि ऊ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संरक्षक र उद्धारकर्ताको रूपमा चयन गरिएको छ। यस कारणका लागि, एलेक्सन ईन्स्ट्राक्टिक आउटकास्ट एलियनहरूको समूहको साथ एक टोली गठन गर्दछ जसले सम्पूर्ण आकाशगंगा पत्ता लगाउँदछ।
पुस्तकहरू प्रगति हुँदै जाँदा, यो पृथ्वी, जार्कियनहरूलाई अन्त्य गर्न आतुर हुने एक दौडमा देखा पर्‍यो। माथि उल्लिखित तत्वहरू जुआन गेमेज-जुराडोले मिसाईएको यात्रामा उत्साहजनक साहसिक यात्राको साथ, धेरै मनोरन्जनात्मक र रमाईलो तरीकामा वर्णन गरिएको। श्रृंखला चारवटा शीर्षकले बनेको छ, प्रत्येक कुशलतापूर्वक फ्रान्स फ्रिज द्वारा चित्रण गरिएको। तिनीहरू यहाँ तल उल्लेख गरिएको छ:
एलेक्स कोल्ट स्पेस क्याडेट (2016)।
एलेक्स कोल्ट Ganymede को युद्ध (2017)।
एलेक्स कोल्ट जार्कको रहस्य (2018)।
एलेक्स कोल्ट गाढा पदार्थ (2019)।
यो जुआन गोमेज-जुराडो द्वारा बाल-युवा विषयवस्तुसहितको अर्को बेग्लै चीज हो। तिनीहरू बाल मनोवैज्ञानिक बरबारा मोन्टेसको सहयोगमा बनेका थिए र फ्रान्स फेरीजद्वारा चित्रण चित्रण। तिनीहरू बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा पढ्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, र वातावरण प्रति प्रेमलाई बढावा दिनको उद्देश्यका साथ सिर्जना गरिएको हो।
विषयहरू जस्तै राम्रो बेहोरा, साहस वा वफादारी एक हास्यको राम्रो भावनाको साथ सम्पर्क गरिन्छ जुन धेरै प्राकृतिक देखिन्छ। अवश्य पनि, त्यहाँ रोमांचको कमी छैन र एक धेरै शक्तिशाली हिचको ट्रिगरिंग रहस्यहरू। अहिले सम्म यस श्रृंखलामा चार शीर्षक प्रकाशित भइसकेका छन्:
पुन्टा एस्कोन्डिडाको रहस्य (2017)।
कयामतको खानाहरू (2018)।
भूमिगत महल (2019)।
अँध्यारो जंगल (2019)।
स्वतन्त्र बाल साहित्य प्रकाशन
जुआन गोमेज-जुराडोले बाल-युवा श्रोतालाई लक्षित गर्दै गद्यका दुई पुस्तकहरू लेखेका छन्: अन्य आवाजहरू (सह-लेखकको रूपमा; १ 1996 XNUMX)) र सातौं राजकुमार (2016)। पछिल्लो एक रमाईलो कथा कथन हो, गहिरो थप्नको लागि समयमै प्रयोग गरिएको रूपकहरूका कारण धेरै मनमोहक। नायक सानो बेन्जामिन हो, धेरै टाढा राज्यका सम्राटहरूका छोराहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संवेदनशील।
जुआन गोमेज-जुराडो द्वारा उद्धरण।
यदि कडा अजि .्गर देखा पर्न सक्छ - माना - उसले आफ्ना भाइहरू, राज्यका सबैभन्दा साहसी योद्धाहरूद्वारा भत्काउनु पर्छ। यो नाजुक बेन्जामिनको लागि कहिले पनि मिशन हुने थिएन, तर ... कथाले बौद्धिकता को व्यापकता र भिन्न मानेका लागि सम्मान मा बौद्धिकता को व्यापकता को बारे मा एक अद्भुत पाठ छोड्न। थप रूपमा, जोसे एन्जल एरेसको शानदार चित्रणहरूले एक उत्कृष्ट काम पूरा गर्दछ।
उहाँको गैर कल्पना किताब
भर्जिनिया टेक नरसंहार: एक यातना दिमागको एनाटॉमी (२००)) जुआन गोमेज-जुराडोको पत्रकारितात्मक गुणहरूको सब भन्दा प्रदर्शनिक कार्य हो। यो एक धेरै अस्खलित भाषाको साथ बताइएको एक क्रानिकल हो, जसको कच्चापन र विस्तारको स्तरले असह्य पाठकहरूलाई भ्रमित गर्न सक्छ। त्यस्तै, थ्रिलर शैली को कथन र त्रासदी को प्रशस्त वास्तविक फोटो को कारण अशान्ति को वातावरण धेरै बाक्लो छ।
लेखकको सबैभन्दा ठूलो योग्यता असामान्य चिसोपनसहित मारिएका एक आमहत्याको दोषी चो से -्ग-हुईको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल निर्माण हो। कोरियनमा जन्मेका कलेज विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नु अघि उनको परिसरबाट us२ कक्षाका साथीहरूको हत्या गरे। यद्यपि यस घटनाका धेरै भरपर्दो छविहरू एस्केटोलोजिकल देखिन्छन्, कुनै समय त्यहाँ वक्ताको तर्फबाट कुनै विकृति वा अनादर हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जुआन गोमेज-जुराडोका पुस्तकहरू
कार्मेन सेसिलिया अल्बारासिन हर्नान्डेज भन्यो
मलाई यो चाखलाग्दो छ, जुआन गोमेज जुराडोद्वारा प्रयोग गरिएको विधा
CARMEN CECILIA ALBARRACIN HERNANDEZ लाई जवाफ दिनुहोस्
अरोरा रोसेलो भन्यो
मलाई लाग्छ कि उहाँ षड्यन्त्रपूर्ण उपन्यासहरूको एक महान लेखक हुनुहुन्छ ... एक बर्ष भन्दा कममा मैले उनका सबै उपन्यासहरू पढेको छु ...
अरोरा रोजेलोलाई जवाफ दिनुहोस्
आयरिश लेखकहरू सेन्ट पैट्रिक मनाउन। रोजिएका वाक्यांशहरू
एल् चिको डे लास बोबिनासका लेखक पेरे सर्भेन्टेससँग अन्तर्वार्ता